သင်တန်း – BurmeseHearts
တခါတရံမှာ ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ smartphone မျက်နှာပြင်တွေက လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံသင်ယူတာလောက် တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ ပြည်ပက ကိုယ်သင်ယူချင်တဲ့သင်တန်း ၊ ကိုယ်သင်ယူလိုတဲ့နေရာ ၊ ကိုယ်သင်ယူလိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်းအမျိုးအစားကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ဒီသင်တန်းနဲ့ ဒီဆရာရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မှတ်ချက်ပေးထားတာတွေကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိနိုင်မယ့် Online marketplace နေရာအဖြစ် BurmeseHearts က လက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်။
မိမိသင်တန်းကျောင်းတွေကို BurmeseHearts မှာ တင်သွင်းလိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်းအုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ အခမဲ့ စာရင်းတင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာ BurmeseHearts ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်တက်ရောက်တဲ့ သင်တန်းသားတွေကိုသာ ဝန်ဆောင်ခ ကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်တန်းကျောင်းတွေအနေနဲ့ ဘာငွေမှကြိုတင်ပေးဆောင်ထားရတာမျိုး မရှိပါဘူး။
programming သင်တန်းတွေ ၊ ဒီဇိုင်းသင်တန်းတွေ ၊ အချက်အပြုတ်နဲ့ မုန့်ဖုတ်သင်တန်းတွေ ၊ အတီးအမှုတ် ၊ အနုပညာနဲ့ ၊ ပန်းချီ ပုံဆွဲသင်တန်းတွေ ၊ ဓါတ်ပုံပညာသင်တန်းတွေ အစရှိသဖြင့်သော သင်တန်းတွေ နဲ့ workshop တွေ ၊ event တွေကိုပါ အခမဲ့စာရင်းတင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ပြည်ပက သင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်သင်ကြားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း BurmeseHearts က ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းသား / ကျောင်းသူဆိုရင်တော့
၁. ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သင်တန်းနဲ့ဆရာကို ရွေးချယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
၂. ကိုယ့်အတွက် Booking ကြိုလုပ်ထားတာမျိုး ၊ ငွေချေလိုက်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်အရယူပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အချိန်မကုန် ၊ လူမပင်ပန်း ၊ ခရီးစားရိတ်မကုန်ဘဲ BurmeseHearts ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ကနေ ကိုယ်တက်ရောက်လိုတဲ့သင်တန်းကျောင်းကို တက်ရောက်ဖို့ သင်တန်းအပ်ပြီးပြီပေါ့။
Sometimesacomputer or smartphone screen just can’t replace real human interaction. BurmeseHearts offer an Online marketplace where instructors and students can list, discover, and book offline lessons, workshops, events in Myanmar and internationally.
Listings are free, but BurmeseHearts takesa% commission for each booking through the site.
Anything from programming ,design ,baking, cooking, music, arts drawing, painting, photography, andavariety of classes/workshops/events being offered. If you plan to study abroad we can also help.
To register as an Instructor and list your course please
Find your perfect instructors and in-person classes in Myanmar.
Make payment online or just book 1st to secure your spot for the classes.
That’s all! Now you’re on your way to picking up that new skill.